यसरी रमाइरहेका छन् फुटबलरहरू क्रिसमसमा (फोटो फिचर)
१० पुष २०७५, मंगलवार ०८:१८
काठमाडौं, पुस १० आज विश्वभरि नै क्रिसमस पर्व मनाइँदैछ । यो पर्वको रमझममा फुटबल खेलाडी पनि रमाइरहेका छन् । अधिकांश खेलाडीहरू अहिले बिदामा रहेका छन् । सन् २०१८ का लिग खेल सकिएपछि क्रिसमस पर्व तथा जाडो बिदाको समयमा अहिले खेलाडीहरू आफ्नो घर÷देश फर्किएका छन् । उनीहरूले आफ्नो परिवारसँग रहेर पर्व मनाइरहेका.....
९ पुष २०७५, सोमबार १४:५७
एजेन्सी, पुस ९ वर्ष २०१८ का लागि केहीबाहेक अधिकांश लिगका खेल सकिएका छन् । यस वर्षका खेल सकिएपछि खेलाडीहरू धमाधम क्रिसमस बिदामा जानेक्रम जारी छ । कोही आफ्नो देश फर्किइरहेका छन् भने कोही परिवार भएको ठाउँमा जानेक्रम जारी छ । यसैक्रममा स्पेनिस बार्सिलोनाका खेलाडी पनि यतिबेला बिदामा छन् । टोलीका अधिकांश खेलाडी.....
कतारद्वारा विश्वकपको फाइनल खेल हुने रंगशाला सार्वजनिक (हेर्नुहोस् पाँच तस्बिरमा)
३ पुष २०७५, मंगलवार ०७:०८
एजेन्सी, पुस २ सन् २०२२ को फिफा विश्वकप फुटबल कतारमा आयोना हुँदैछ । सो विश्वकप फुटबलको उद्घाटन र फाइनल हुने लुसेल रंगशालाको डिजाइन आयोजक देश कतारले हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । खाडी मुलुक कतारले विश्वकपका लागि निर्माण हुँदै गरेको लुसेल रंगशालाको डिजाइन हालसालै सार्वजनिक गरेको हो । कतारका अनुसार लुसेल.....
१० कार्तिक २०७५, शनिबार ०७:४७
पोखरा, कात्तिक १० आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको ट्रफी आज पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा सार्वजनिक गरिएको छ । अघिल्लो दिन शुक्रबार साँझ काठमाडौं ल्याइएको ट्रफीलाई सोही दिन साँझ स्वयम्भूमा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि आज पोखरा ल्याएर माछापुछ«े र अन्नपूर्ण हिमालको काख पोखरामा ट्रफी प्रदर्शन.....
८ कार्तिक २०७५, बिहीबार १४:३५
काठमाडौं, कात्तिक ८ युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा अन्तिम ३२ अन्तर्गत तेस्रो खेलमा बार्सिलोनाले आफ्नो घरेलु मैदानमा इन्टर मिलानविरुद्ध खेल्दा टोलीका कप्तान लिओनल मेस्सी टोलीमा थिएनन् । गत साता ला लिगामा आफ्नै घरमा सेभिल्लाविरुद्धको खेलक्रममा मेस्सी हात भाँचिएपछि टोलीबाहिर रहेका थिए । बुधबारको.....
हात भाँचिएपछि पहिलोपटक ‘आर्म स्लिङ’मा देखिए मेस्सी !
६ कार्तिक २०७५, मंगलवार १४:०१
एजेन्सी, कात्तिक ६ स्पेनिस बार्सिलोनाले भोलि (बुधबार राति) युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानसँग समूह चरणको तेस्रो खेल खेल्दैछ । सो खेलका लागि बार्सिलोनाले मिलानलाई आफ्नो घर क्याम्प नोउमा स्वागत गर्दैछ । त्यसैगरी, यसै साता (अक्टोबर २६) मा बार्सिलोनाले ला लिगामा सिजनको पहिलो इएल क्लासिको.....
‘रुँदै मैदान छाडेका’ रोनाल्डो ‘हाँस्दै’ प्रशिक्षणमा फर्किए ! (हेर्नुहोस् चार तस्बिरमा)
६ आश्विन २०७५, शनिबार १४:५६
एजेन्सी, असोज ६ युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा गत बुधबार भएको सिजनको पहिलो खेलमा पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोका लागि दुखद् रह्यो । नयाँ क्लब युभेन्टसका लागि पहिलो च्याम्पियन्स लिग खेल खेल्नेक्रममा रोनाल्डोले स्पेनिस भ्यालेन्सियाविरुद्धको खेलमा रातो कार्ड पाए । खेलको २९औं मिनेटमा.....
विश्वकपका लागि ‘बेहुलीझैं’ सिंगारिएका यी १२ रंगशाला (फोटो–फिचर)
एजेन्सी, जेठ २२ रसियामा हुने फिफा विश्वकप फुटबल–२०१८ विधिवत रूपमा सुरु हुन अब मात्रै ८ दिन बाँकी छ । फुटबलको यस महाकुम्भमा कूल ३२ टोलीले भिडन्त गर्दैछन् । प्रतियोगितामा जम्मा ६४ खेल हुनेछन् । यी ६४ खेल रसियाको राजधानी मस्कोसहित विभिन्न ११ सहरका १२ रंगशालामा खेलाइने छ । प्रतियोगिता जुन १४ देखि जुलाई १५.....